अव बीमा क्षेत्रमा हिजोको सोँचले काम गर्दैन : दीपप्रकाश पाण्डे - samayapost.com
अव बीमा क्षेत्रमा हिजोको सोँचले काम गर्दैन : दीपप्रकाश पाण्डे
समयपोष्ट २०७४ फागुन १९ गते ८:११
नेपालको अर्थतन्त्रमा बीमाको योगदान कस्तो छ ?
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा त धेरै कम छ । करिब दुई प्रतिशत होला । बीमाको पहुँच बढिरहेको हुँदा परिवर्तन भइरहेको छ । यसअघि बीमा कम्पनीहरू सहरमुखी भए भन्ने गरिन्थ्यो तर अहिले गाउँ–गाउँमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । बीमाको इतिहास हेर्ने हो भने यो जहिले पनि फोर्स मार्केटको रूपमा विकास भएको छ । आवश्यकता भन्दा पनि कुनै एउटा फ्याक्टले त्यसलाई जहिले पनि धकेल्नतिर लाग्यो । नेपाल बैङ्कको प्रवद्र्धनमा नेपाल इन्स्योरेन्स आयो । त्यसपछि वृद्धि भएको द्वन्दकाल अवधिमा हो । किनभने मानिसलाई डरले धकेल्यो । त्यसले थर्ड पार्टी दायित्व बढायो ।
त्यसपछि कृषि बीमा, जसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । मानिसले भूकम्पपछि बीमाको महत्व बुझ्न थालेका छन् । त्यसमा पनि सबैले होइन, केही पक्षले बुझेका छन् । यसअघि बीमासँग जनमानसको विश्वास थिएन । नाफा वृद्धि गर्न चाहने कम्पनीले दाबीमैै सम्झौता गर्न थाले कि ? अलि झन्झटिलो पनि थियो होला । त्यस कारण जनमानसको विश्वास आएन । अहिले त्यो झन्झटिलोपन हटेको छ । दाबी तिरेको छ, जसले गाउँ–गाउँमा बीमाप्रति मानिसको विश्वास बढाएको छ । अब बीमाले गति लिँदै छ । सायद बीमाले गति लिएपछि जीडीपी पनि बढाउला । गाउँ–गाउँमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले शाखा खोलेर रोजगारीको अवसर प्रदान गरेका छन् ।
हाम्रो कम्पनीले मात्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाले मात्र वर्षको झन्डै असी–नब्बे करोडको कर तिर्छ । यो वर्ष अझ राम्रो भए झन्डै एक अर्बकै तिर्छौं होला । त्यो भनेको एउटा राम्रो पाटो आएको छ । यसले सकारात्मक दिशा लिएको छ, तीन–चारवटा कोणबाट । एउटा, बजार स्वाभाविक वृद्धि भएको होला । बीमा कम्पनीको पुँजी बढ्यो, रिस्क वहन गर्न सक्ने क्षमता बढ्यो । म्यानेजमेन्टलाई व्यवसाय वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रेसर पनि आयो । त्यो सबै पक्षले बीमा क्षेत्रमा सकारात्मक शक्ति जिर्सना गरेको छ । त्यसैले बीमा क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ ।
बीमाको पहुँच विस्तार गर्न नयाँ कम्पनीहरू आएका छन् । यससँगै बीमा क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी भयो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
प्रतिस्पर्धा दुईवटा कोणबाट हुन्छ । एउटा, नीति नियम उलङ्घन गर्ने र अर्को, रेटमै प्रतिस्पर्धा हुने हो । त्यसले उपभोक्तालाई फाइदा गर्छ । नन्ट्यारिफ रेन्सहरूमा रेट घटाएर सरभाइभ गर्छ भने म त्यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्छु । किनभने अन्ततः त्यसले फाइदा कस्टमरलाई नै पुग्छ । तर नीति–नियम भ्वायोलेट गर्ने अथवा अस्वस्थ अरू अभ्यासहरू ल्याउने गलत प्रक्टिसेस हुनु भएन । तर प्रतिस्पर्धा बढेपछि यो एउटा पासिङ फेज हो । अलिअलि हुन्छ र चाँडै नै निराकरण पनि हुन्छ । यो दीर्घकालीनरूपमा जाँदैन ।
नयाँ कम्पनीहरू अब कसरी अगाडि जानुपर्ला ?
नयाँ कम्पनीहरू आएको भर्खर ६ महिना भयो । बजारको अवस्था हेरेर कुन किसिमको प्रडक्ट हो, ग्राहकको अपेक्षा कस्तो हो, त्यो किसिमले नयाँ प्रडक्टमा जाने हो । नभए जीवन बीमा कम्पनीहरू जाने भनेको त्यही परम्परागत मनिव्याक पोलिसीमा हो । सकारात्मक पक्ष भनेको रिच बढेको छ । मान्छेहरू गाउँ–गाउँमा पुगेका छन्, एजेन्टहरू विकास गरेका छन् । तालिम दिएका छन्, क्रियाकलापहरू बढेका छन् । रोजगारी सिर्जना भएको छ । तर चाँडै नै नयाँ–नयाँ प्रडक्टहरू पनि आउँछन् । भएकै प्रडक्टहरूमा पनि अतिरिक्त फाइदा राखेर कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धीरूपमा आउँछन् ।
बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभावले हो ?
एक त यहाँ तालिम दिने संस्था छैन । अर्को, बीमा कम्पनीहरूको वृद्धि, रिटर्न टु सेयर होल्डर्स, व्यवसायिकता थिएन । त्यो कम्पनीको पुँजी व्यवसायमा निर्भर हुने कुरा हो । कम्पनीले राम्रो गर्न सकेन कर्मचारीलाई भन्ने कुरा परिवर्तन भइसक्यो । हिजो थिएन भन्दिनँ तर आज राम्रो छ । सबै कोणबाट भोलि झन् राम्रो हुनेछ । बढ्दो बजारमा दक्ष जनशक्तिको जहिले पनि कमी हुन्छ । कसरी बढाउने, त्यो कम्पनीमा निर्भर हुन्छ ।
अन्य कम्पनीमा जाने त्यो कम्पनीका कर्मचारीहरूको अधिकारको कुरा हो । हाम्रो कम्पनीमा आजका दिनसम्म झन्डै ४ सय २५ जना कर्मचारी पुगिसके । हामी १५ जनाबाहेक अन्य सबैको पहिलो जब अनुभव भनेको शिखर नै हो । विकास गर्यो भने सकिने रहेछ त । सुरु–सुरुमा गाउँमा जाँदा यस्ता समस्या आउँछन्, आखिर गरेपछि त सकिँदो रहेछ । हामी आममानिसमा कोसिस नै नगरी पहिले नै सक्दिनँ होला भन्ने सोच रहेको छ । हामी अन्य बाटो खोज्नतिरै लाग्दैनौँ । अव हिजोको सोँचले काम गर्दैन । हाम्रो दिमागमा भएको सोच निकालेर अगाडि बढ्ने र गरेपछि के हुन्छ बल्ल थाहा हुन्छ । हामीलाई पनि पहिले पुँजी कम हुँदा डर लाग्थ्यो । अहिले पुँजी र नाफा बढेको छ । अब अलिकति रिस्क लिन सक्ने क्षमता सबैमा भएको छ । त्यसले गर्दा कम्पनीले आफैँले गर्न सक्नुपर्यो ।
नयाँ आएका कम्पनीहरूको पुँजी पनि धेरै छ । त्यसकारण उनीहरू दक्ष जनशक्ति विकासमा अगाडि बढ्नुपर्यो । अन्य ठाउँबाट जनशक्ति तान्ने भनेको अल्पकालीन समाधान हो । भोलि त्यो मान्छे अरूले तान्न सक्छ । त्यो सोच कम्पनीमा आउनुपर्यो । अर्को, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू मिलेर दक्ष जनशक्ति बढाउन एकेडेमी कसरी खोल्ने, तालिम केन्द्रहरू कसरी अगाडि बढाउने भनेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्न खोज्दै छौँ । यो समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ ।
दाबी भुक्तानी पहुँच हुनेले छिटो पाउने र पहुँच नहुनेलाई गाह्रो पर्ने हुनाले मानिसहरूको बीमाप्रति आकर्षण नभएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
त्यो हिजोको सोच हो । आजको दिनमा त्यस्तो छैन । पोलिसीमै ग्राहकले नियम र सर्तहरू मिलाएको छैन भने पहुँच पुर्याउने हो । साधारण मान्छेलाई बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी सहजरूपमा दिँदैन भने त्यो कम्पनीको अस्तित्वमै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । १७ वटा कम्पनीहरू छन् । निर्जीवन बीमातर्फ तीनवटा कम्पनीहरू थपिँदै छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरूमा त अझ म त्यस्ता समस्या नै देख्दिनँ । निर्जीवनतर्फ त्यस्तो भयो भने त्यो कम्पनी नै टिक्दैन ।
शिखर इन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
हामी १४औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । हामीले झन्डै ३ सय ५७ करोडको लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ । आजको दिनमा झन्डै १ सय ८५ करोड पुगेको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा ३ सय ४० करोड पुग्छ जस्तो लाग्छ । बजार कसरी जान्छ, त्यसमा भर पर्छ । हाम्रो मुख्य चिन्ता भनेको तरलताले गर्दा बीचमा लोनहरू नजाला भन्ने हो । बीमाको बजार बढ्ने भनेको बजारीकरणले नै हो । पहुँच छ, हामी पुगेका पनि छौँ तर त्यहाँ बजार त क्रियट हुनुपर्यो । वित्तीय क्षेत्र पुगे भने न बीमा कम्पनी पुग्ने हो । हामीले त्यसको लागि डिष्ट्रिव्युसन च्यानलहरू अलिकति परिवर्तन गरेका छौँ ।
नयाँ नीति लिएर अगाडि बढेका छौँ । यसपालिको हाम्रो नेट वर्थ भनेको २ सय २५ करोडजतिको हुन्छ होला । आजभन्दा १४ वर्षअगाडि साढे १२ करोडको पुँजीबाट यतिसम्म पुग्नु भनेको राम्रो ग्रोथ जस्तो लाग्छ । कम्पनी सक्षम छ तर हामी के विश्वास गर्छौं भने एउटा असन्तुष्ट कस्टमर भयो भने त्यसले कम्पनीलाई धेरै नराम्रो असर गर्न सक्छ । त्यस कारण हामी कस्टमरको सन्तुष्टिमा नै केन्द्रित छौँ । यो त्यति सजिलो काम पक्कै होइन । तपाईंको उद्देश्य राम्रो छ र गर्न सक्छु भन्ने चाहना छ र गर्छु भन्ने भावना लिएर अगाडि बढे सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
तपाईंहरूले पछिल्लो पटक प्रस्ताव गर्नुभएको थप साधारण सेयर (एफपीओ) के भएको छ ?
हामीे कुनै नीति–नियमको विरुद्ध गएको होइन । हामीले प्रक्रिया पुर्याएर एजीएमबाट पास गराएर कम्पनी रजिष्ट्रार, बीमा समितिबाट स्वीकृत गराएर गएका हौँ । धितोपत्रले नयाँ नियम ल्यायो, हामी त्यसलाई स्वागत नै गर्छौं । अगाडि आउँदा अहिले पनि अवसरहरू छन् । अर्को दुई वर्षको कुरा हो, अहिले हामीलाई त्यति जरुरी पनि छैन ।
यसअघिको बीमा ऐनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई २ अर्बको पुँजी चाहिने व्यवस्था थियो । त्यो अनुसार यो भयो भने हामी सहज हुन्छौँ भन्ने छ । नयाँ आयो भने त्यो बेलासम्म हामी थप साधारण सेयरमा जान सक्षम हुन्छौँ । तर त्यो जरुरी छैन । २ अर्बको क्यापिटल पुर्याउन ३ वर्षको समय भयो भने हामी त्यति पुँजी पुर्याउन सक्छौँ ।
यस कम्पनीका नयाँ योजना के छन् ?
हामीले नयाँ–नयाँ योजनाहरू नै ल्याइरहेका छौँ । हामीले वेदर इन्डेक्स गरेकै छौँ । जुम्लामा त्यसको राम्रो नतिजा आएको छ । हामीले अघिल्लो वर्ष मात्र क्लेम तिर्यौं । मानिसहरूमा आत्मविश्वास बढेको छ । युनिटी लाइफ जस्तोले त्यहाँको बजार नै बिगारेको थियो । बीमाप्रति जनचेतनाको नै कमी थियो । त्यतातिर हामी गई नै रहेका छौँ । जुम्लाको कृषकले फाइदा उठाएकाले नै हुम्लाले हामीलाई पनि गरिदेऊ भनिरहेको छ । शाखा मात्र हाम्रो आजको दिनमा ६५ वटा पुग्न लागिसकेको छ । यो आर्थिक वर्षसम्म हामी ७५ वटा शाखा खोलेर अगाडि बढ्छौँ ।
यस्तै, वेदर इन्डेक्स प्रोजेक्टमा हामी नगदे बालीतिर जाँदै छौँ । त्यसले पनि बजार विस्तार गर्छ होला । गाउँ–गाउँमा मानिसहरूको आवश्यकता जहाँ–जहाँ छ, त्यहाँ कसरी जाने ? कृषि, पशुमा हामीले धेरै नै कसरत गरेर अगाडि बढेका छौँ । त्यसले अरू बीमा क्षेत्र बढाएको छ ।
हामी स्वास्थ्य बीमामा पायोनियरको रूपमा आयौँ । एक्सरसाइज गर्दै छौँ । थर्ड पार्टी एडमिनिष्टेटरको भूमिका क्लियर भएपछि सायद हामी त्यतातिर पनि अगाडि बढ्छौँ होला । अब हामीले शिखर इन्स्योरेन्स व्यवसायिक रूपमा म्यानेज, विश्वासिलो कम्पनी हो, यो स्ट्रङ छ, यहाँ बीमा गर्यो भने मलाई अन्याय हुँदैन है भन्ने आमनागरिकको विश्वास जित्नु छ । त्यतातिर लागिपरेका छौँ ।
लोकप्रिय हुँदै आई.एम.ई लाइफको बालकिरण जीवन बीमा योजना
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र चिरायु हस्पिटलबिच सम्झौता
बैबाहिक समारोहमा आमाले छोरी ज्वाईंलाई दिईन् बीमा कोसेली
जनरल इन्स्योरेन्सको शुभकामना आदान प्रदान तथा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
अजोड इन्स्योरेन्सद्धारा घुम्ति बीमा सेवा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
गुल्मीमा अजोड इन्स्योरेन्सको तालिम सम्पन्न